ယောဟန် 13: 34-35 - "ဒါကြောင့်ယခုငါသည်သင်တို့ကိုပညတ်သစ်ပေးခြင်းငါ: တစ်ဦးချင်းစီကတခြား Love ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုချစ်ရမည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အဘို့သင်၏မေတ္တာသင်တို့သည်ငါ၏တပည့်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကိုသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ ။ ။ " (NLT)
သမ္မာကျမ်း မှစ. သင်ခန်းစာကို: လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သညျယရှေု
ဒါဟာclichéထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ့အပြစ်များအတွက်အသေခံရန်ယေရှုရဲ့စိတ်အားထက်သန်စျြခွငျးမတ်ေတာ၏ပွယုဂျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့အားလုံးဆီသို့ကွိုးစားသငျ့မတ်ေတာ၏သာဓကဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကဖာရိရှဲတို့၏တောင်းဆိုချက်များကိုအတွက်ပေးပြီနိုင်ဘူး။ သူဟာမေရှိယကိုမသိကြောင်း၎င်းကပြောသည်ရှိသည်ဟုနိုင်ပေမယ့်သူကမရကိုပြု၏။ သူကအဓိပ်ပာအမှန်တရားပြောပြဘယ်အရာကို သိ. , သူကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တက်သေဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ - တဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည်သေခြင်း။ သူကရိုက်နှက် cajoled ခဲ့သည်။ သူကထိုးဖောကျခဲ့သညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထိုအသေး, သူ, ငါတို့အဘို့ကအားလုံးကိုပြုလေ၏။
ယေရှုကသူကိုအကိုချစ်တော်မူအဖြစ်အချင်းချင်းချစ်ရယောဟနျ 13 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ သင်န်းကျင်သူတွေကိုမေတ္တာဘယ်လောက်ပြသပါသလဲ သင်အလွန်ကြင်နာမဟုတ်သောသူတို့၏အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ဂရုစိုက်သလဲ? အဘယျသို့သောယဇ်ပူဇော်ပွဲကိုသင်န်းကျင်သူတွေကိုကူညီဖို့အောင်နေကြသနည်း ကြင်နာမှု, ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါငျးတို့သဝိညာဉ်တော်၏အံ့သြဖွယ်အသီးအပွများမှာနေစဉ်, သူတို့နေဆဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကဲ့သို့ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။
ယေရှုကဲ့သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိခြင်းသည်လူတိုငျးအတှကျခစျြကြီးထွားလာဆိုလိုသည်။ ဒါကအစဉ်အမြဲပြုပါရန်အရိုးရှင်းဆုံးအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူ့ယုတ်သောအရာတို့ကိုပြောဆိုကြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေခြင်း, တခါတရံတွင်မေတ္တာပေါ်မှာငါတို့အာရုံစိုက်ထားရန်ခဲယဉ်းသည်။
တစ်ခါတစ်ရံခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်ဒီတော့သူတို့ကိုထိခိုက်စေမယ့်သူတို့ကခက်ခဲမည်သူမဆိုကိုချစ်ရန်ရှာတွေ့ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်နေကြသည်။ အခြားအကြိမ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုယျ့ကိုယျကိုမေတ္တာရှင်ကျွန်တော်တို့ကို၏လမ်းရဖို့, ဒါကြောင့်အခြားသူတွေကိုချစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။
သို့သော်သခင်ယေရှုကဲ့သို့တစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်း '' သင်၏နှလုံး၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆုတောင်းပဌနာအားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်, ခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင်မှအခက်ခဲဆုံးလူတွေမေတ္တာရှင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သူတို့ကိုသင်ချစ်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်မှမရှိကြပါဘူး။ ယရှေုသညျန်းကျင်ကလူလုပ်နေတယ်ခဲ့ကြသည်အရာများစွာကိုမကြိုက်ကြဘူး, ဒါပေမဲ့သူနေဆဲသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ အပြစ်တရား၏အမှန်တကယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။ တစ်ဦးစကားပုံရှိပါသည် "ဟုအဆိုပါအပြစ်တရားကိုမုန်းမဟုတျဘဲအပြစ်သား။ " ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြစ်တရားနှင့် သညျယရှေုကိုခစျြ ကျွန်တော်တို့ကို။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာအစားလူတစ်ဦးမှာလုပ်ရပ်ကျော်လွန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ယခုတပတ်အတွက်ချစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမေတ္တာရှင်ပေါ်တွင်သင်၏ပဌနာကိုအာရုံစူးစိုက်။ သငျသညျလုပ်ရပ်များအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရပါပွီကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာ၌လူများ၏စဉ်းစားပါ, သင်သည်လုပ်ရပ် ကျော်လွန်. ကြည့်ရှုကူညီပေးဖို့ဘုရားသခငျကိုမေးပါ။ သူသင့်ကိုချစ်သကဲ့သို့သင်တို့လှည့်ပတ်သောသူတို့အားမေတ္တာရှင်ရန်သင့်နှလုံးဖွင့်လှစ်သညျဘုရားသခငျကိုမေးပါနှင့်ဆိုအခြားသူတွေမေတ္တာရှင်ထံမှသင်တို့စောင့်ရှောက်သောနှိပ်စက်တာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပါ။
Naruto ကို Shippuden ရိုင်း 24 နှင့် 25 (DVD ကို) ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသတ်မှတ်ရန်
အဆိုပါ Oriel Window - တစ်ဗိသုကာဖြေရှင်းချက်
ဒါဟာ Mango အရေပြားစားရန်အိုကေလား?
ကနူးလှေများနှင့်လှေစီးနေသည် Paddling ဂရိတ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်
'' အကူအညီလိုအပ်နေသူအိမ်ရှင်မ '' အက္ခရာ Profiles
R & B အဆိုတော်များ၏ရီးရဲလ်အမည်များ
ဒေါက်တာအဲလက်စ် Shigo အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Hattusha, ဟိတ္တိအင်ပါယာ၏မြို့တော်စီးတီး: တစ်ဓာတ်ပုံစာစီစာကုံး
တစ်ဦး Mockingbird လေ့လာမှုလမ်းညွှန် Kill မှ